महानायक राजेश हमाल बने अभिभावक
जीतपुर, कपिलवस्तु । नेपाली चलचित्रका ‘महानायक’ राजेश हमालले एक बालकलाई शुक्रबार विद्यालय भर्ना गराएका छन् बाँकी अंश»
पूर्वी कमाण्डको वेशक्याम्प बनाउन थाले विप्लव, दुई कार्यकर्ता पक्राउ
सिन्धुली । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले नेकपा माओवादी (विप्लब) नेतृत्वका थप दुईजना कार्यकर्ता पक्राउ गरेको छ । हरिहरपुरगढी गाउँपालिका– ६ कोवाडाँडाबाट शुक्रवार दिउँसो ३ बजे उनीहरुलाई बम विष्फोटन गराउने सामग्री तथा बन्दोबस्तीका सामानसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको हो बाँकी अंश»
एकता भाका सर्‍यो, संयुक्त कार्यक्रममा टर्‍यो
स्थापना दिवसमा एकताको ठोस् सन्देश दिँदै एमाले–माओवादी केन्द्र
काठमाडौँ । औपचारिक एकता घोषणा नभए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका दिन आइतबार दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताले आफूहरु चाँडै एकीकृत हुने ठोस् सन्देश दिने भएका छन् । बाँकी अंश»
वार कि पार वार्तामा ओली र प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच पार्टी एकताको विषयलाई शुक्रवार छलफल भएको छ । दुवै बीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा कार्यदलले बुझाएको बाँकी अंश»
मच्छिन्द्रनाथको रथ यसपाली धुपीले किन सजाइएन ?
काठमाडौं । रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यसपाली धुपीका पातले नसजाइकनै तानिएको छ । रथ यात्रा शुरु गर्नुअघि नै रातो मच्छिन्द्रनाथ र मिननाथको रथमा धुपीको पातले सजाउने परम्परा थियो । रथ तान्नु अघि नै आबश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री गुठी संस्थानले बाँकी अंश»
स्थापना दिवसकै दिन राजपा नेपाल फुट्यो
काठमाडौं। राष्ट्रिय जनता नेपाल फुटेको छ । राजपा नेपालका उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादवको नेतृत्वमा पदाधिकारी र केन्द्रिय सदस्यहरु राजपाबाट अलग्गिएर राष्ट्रिय जनता पार्टी बाँकी अंश»
मनाङ्गे गए जेल : अब मनाङ 'ख' को चुनाव के हुन्छ ?
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगित
नामै काफी हैन रैछ, बिपी कोइराला प्रतिष्ठानको मातृशिशु भवन अलपत्र, दोषी को ?
चालक निदाएपछि तीर्थयात्री बोकेको बस दुर्घटनाग्रस्त
दीपक मनाङे लुकिरहेकै अवस्थामा काठमाडौंबाट पक्राउ
तीन दिनभित्र कर्मचारीको विवरण पठाउन मन्त्रालयको निर्देशन